काठमाण्डु । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि फेरी एक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै सबैलाई चनाखो बन्न आग्रह गरेका छन् ।
मेडिकल माफियाहरुसँग पैसा उठाउंदै जथाभावी ढंगबाट सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै सभापति देउवाले डा. केसीले उठाएको माग पूरा नभए कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गर्ने बताए ।
महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. रामशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण खाँड लगायतकाले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाका लागि कांग्रेस कार्यकर्ता चनाखो भएर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बेला भएको बताए ।